Ụdị faịlụ | January 2020
Wụnye njehie ngwa Launcher.exe
Launcher.exe bụ otu n'ime faịlụ ndị a na-arụ ọrụ, e mekwara ya iji wụnye usoro mmemme. Karịsịa mgbe ndị ọrụ nwere nsogbu na faịlụ nke usoro EXE, ọ pụkwara inwe ọtụtụ ihe kpatara nke a. Ọzọ, anyị na-enyocha isi nsogbu ndị na-eduga na njehie nke ngwa Launcher.exe wee tụlee ụzọ maka ịhazigharịa ha.
Open FLV video format
Ọkpụkpọ FLV (Flash Video) bụ ihe mgbasa ozi, nke a bu n'obi maka ịlele vidio vidiyo site na ihe nchọgharị. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe omume ndị na-enye gị ohere ibudata vidiyo dị otú a na kọmputa. Na njikọ a, okwu nke nlele ya na mpaghara site n'enyemaka nke ndị vidiyo na ngwa ndị ọzọ dị mkpa.
Mepee faịlụ faịlụ WLMP
Ihe odide WLMP gụnyere data nke arụmọrụ nhazi vidiyo na Windows Live Movie Studio. Taa, anyị chọrọ ịgwa gị ụdị usoro a na ma ọ nwere ike meghere ya. Otu esi mepee faịlụ WLMP N'eziokwu, faịlụ nke ikikere a bụ akwụkwọ XML nke na-echekwa ozi gbasara usoro ihe nkiri ahụ e kere na Windows Live Studios.
Esi emeghe aspx
Mgbatị .aspx bụ faịlụ weebụ nke e mepụtara site na iji teknụzụ ASP.NET. Ihe njirimara ha bụ njikota ụdị weebụ n'ime ha, dịka ọmụmaatụ, jupụta na tebụl. Mepee usoro a. N'iji nkoo, tụlee ihe omume ndị na-emeghe ibe na ndọtị a.
Ntinye VHD mmeghe
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-eji PC, ọ ga-adị mkpa iji wụnye ọtụtụ usoro arụmọrụ jikwaa n'okpuru osụ os. Nkpu diski siri ike echekwara na usoro VHD na-enye gị ohere ime nke a. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi mepee ụdị faịlụ a. VHD faịlụ VHD mmeghe, kwukwara na ọ bụ "Diski Ike Dị Ike", bu n'obi ichekwa ụdị os dị iche iche OS, mmemme na ọtụtụ faịlụ ndị ọzọ.
Esi emeghe ederede okwu na SRT usoro
SRT (SubRip Subtitle File) - usoro nke faịlụ ederede nke echekwara ederede na vidiyo. Dịka, a na-ekesa ndepụta okwu ndị ahụ na vidiyo ma tinye ederede na-egosi oge oge ọ ga-apụta na ihuenyo. Enwere ụzọ iji lelee ndepụta okwu na enweghị enwere vidiyo?
Ihe ndekọ na H.264 mgbakwunye bụ obere vidiyo. Ịmeghe ha na kọmputa abụghị ihe siri ike, mana usoro ya anaghị adị mfe maka iji ụbọchị. Ihe ngwọta kachasị mma na ọnọdụ a ga-abụ iji tọghata AVI ọzọ. Leekwa: Otu esi emeghe usoro H Conversion H.264-video H.
Nyefee CDR faịlụ na AI
Ihe ederede CDR CorelDraw nke otu nsụgharị abụghị maka iji mee ihe zuru oke n'ihi nkwado ndabere na mpaghara. N'ihi ya, ọ nwere ike ịdị mkpa iji tọghata na nkwalite ndị ọzọ, tinyere AI. Ọzọ, anyị na-atụle ụzọ kacha mma maka ịgbanwe faịlụ dị otú ahụ.
Ntughe DMP Dumps
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke Windows OS ezinụlọ na-ezutekarị faịlụ DMP, yabụ taa anyị chọrọ ịme ka ị banye ngwa ndị nwere ike imeghe faịlụ ndị ahụ. Nhọrọ maka imeghe DMP A DMP ndọtị ka echekwara maka nchekwa ebe nchekwa: nchịkwa nke ala RAM na isi oge na arụ ọrụ nke usoro ma ọ bụ ngwa dị iche iche na ndị mmepe chọrọ maka ịmalite mbido.
Mepee usoro KMZ
KMZ faịlụ nwere data geolocation, dị ka mkpado ọnọdụ, ma a na-ejikarị ngwa ngwa. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na ụwa nwere ike ịkekọrịta ozi dị otú ahụ na ya mere okwu nke ịmepe usoro a dị mkpa. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-atụle ngwa ngwa maka ngwa Windows na-akwado na-arụ ọrụ na KMZ.
PNG PNG na PDF
Mgbasa PNG iji chekwaa faịlụ ndị na-ewu ewu na-eji ya eme ihe. Ọtụtụ mgbe, ọ dị mkpa ka ido onwe gị n'okpuru PDF ka ị nyefee ya n'ọdịnihu. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị e ji arụ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na-elekwasị anya na akpaaka ọrụ na akwụkwọ eletrik na PDF.
Gwa akwụkwọ ọdịyo M4B na MP3
Mpịakọta na M4B ndọtị bụ usoro pụrụ iche nke emere kpọmkwem maka ịchekwa audiobooks meghere na ngwaọrụ Apple. Ọzọ, anyị ga-atụle ụzọ maka ịtụgharị M4B ka ọ bụrụ ihe ngosi MP3. Ịtụgharị M4B na MP3 faịlụ faịlụ na M4B ndọtị nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na usoro M4A n'ihe gbasara usoro mkparịta ụka na ebe ntị.
Mepee faịlụ tmp
TMP (nwa oge) bụ faịlụ nwa oge na-emepụta ụdị mmemme dị iche iche: ederede na table tablet, nchọgharị, sistemụ arụmọrụ, wdg. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ehichapụ ihe ndị a na-akpaghị aka mgbe ị na-azọpụta nsonaazụ ọrụ ma mechie ngwa ahụ. Ntuwa bụ cache ihe nchọgharị (a kpochapụrụ ya dị ka ọkwa a kapịrị ọnụ), nakwa faịlụ ndị fọdụrụ n'ihi mmezigharị mmemme.
Ịpịpụta Vidio DjVu
A na-ekesa ọtụtụ akwụkwọ na akwụkwọ dị iche iche na usoro DjVu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịbịa ụdị akwụkwọ ahụ, n'ihi na taa, anyị ga-eme ka ị nweta ngwọta kachasị mma maka nsogbu a. Ụzọ nke obibi akwụkwọ DjVu Ọtụtụ mmemme nwere ike imeghe akwụkwọ ndị ahụ nwere ihe ha ji emepụta ha iji rụọ ha.
Gbanwee olu nke faịlụ MP3
N'agbanyeghi ewu ewu nke nkesa egwu n'igwe, otutu ndi ozo na-ege nti egwu egwu ha kachasi nma - site na ibudata ha na ekwentị, na onye ogwu ma o bu diski diski PC. Dị ka usoro, a na-ekesa ọtụtụ ntaneti na MP3 usoro, n'etiti adịghị ike nke enwere ụda olu: egwu mgbe ụfọdụ na-ada ụda jụụ.
Mepee usoro MHT
MHT (ma ọ bụ MHTML) bụ usoro nchịkọta weebụ. A na-emepụta ihe a site na ichekwa ibe ihe nchọgharị ahụ na otu faịlụ. Anyị ga-aghọta ihe gbasara ngwa ị nwere ike ijikwa MHT. Ebumnuche maka iji rụọ ọrụ na MHT Nchọgharị maka ịmepụta usoro MHT. Ma, ọ dị mwute, ọ bụghị ihe nchọgharị weebụ niile nwere ike igosipụta ihe na ndọtị a site na iji ọrụ arụmọrụ ya.
Esi emeghe faịlụ BUP
A na-emepụta BUP iji weghachite ihe omuma banyere di na DVD, isi, egwu na ndepụta okwu dị na faịlụ IFO. Ọ bụ nke ụdị DVD-Video na-arụkọ ọrụ na VOB na VRO. A na-enwetakarị na ndekọ "VIDEO_TS". Enwere ike iji ya kama IFO ma ọ bụrụ na njedebe ahụ mebiri emebi.
Ugbu a, ọtụtụ kọmputa enweela ihe siri ike na-ebufe site n'ọtụtụ narị gigabytes na ọtụtụ terabytes. Ma, ọ bụla megabyte nọgidere bara uru, karịsịa ma a bịa n'ịbudata ngwa ngwa na kọmputa ndị ọzọ ma ọ bụ Intanet. Ya mere, ọ na-adịkarị mkpa iji belata faịlụ nke faịlụ ahụ ka ha dịkwuo kọmpat.
Ihe ngosi PPT mmeghe
Otu n'ime usoro a maara nke ọma maka ịmepụta ihe ngosi bụ PPT. Ka anyị chọpụta mgbe ị na-eji kpọmkwem ngwanrọ ngwanrọ ị nwere ike ịlele faịlụ na mgbatị a. Ngwa maka ikiri PPT Cheta na PPT bụ usoro nke ngosi, nke mbụ, ngwa maka ọrụ nkwadebe ya na ya.
Open TIFF usoro
TIFF bụ usoro a na-echekwa mkpado ihe oyiyi. Ma ha nwere ike ịbụ ma azụ ma raster. Ihe ka eji eme ihe n'ilekọta ihe osise na ngwa ndi ozo. Ugbu a, Adobe Systems nwere ikikere na usoro a.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ụdị faịlụ 2020